MOETHIHAAUNG: လွန်တာရှိရင် ၀န္ဒာမိပါ
ကျွန်တော်သည် အစိုးရကို ၀စီကံဖြင်.လည်းကောင်း ၊ မနောကံဖြင်.လည်းကောင်း ကာယကံဖြင်.လည်းကောင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝေဖန်ပြစ်တင်မိပါသည် ။စော်ကားရေးသားမိပါသည် ။ ထိုအချက်များမှာ ကျွန်တော်သည်အမှန်ကိုမသိ၍ရေးသားမိခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အကယ်စင်စစ် အဖြစ်မှန်ကိုသာ သိပါကကျွန်တော်ဤသို.ရေးသားမိမည်မဟုတ် ။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် တိုင်းပြည်အစိုးရသည်ကျွန်တော် ထင်သလောက်မဆိုး ပဲယခုအခါအကောင်းဘက်သို. လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်သောကြောင်.ဖြစ်သည် ။
ပထမဆုံးပြောင်းလဲသွားသူမှာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင်.ဖြစ်သည် ။ဦးအုန်းမြင်.က သူ.စကားကိုသူ တာဝန်ယူသည်.အနေဖြင်.ရာထူးမှနှုတ်ထွက်မည်ဟု တာဝန်သိသိ သတ္တိရှိရှိကြေငြာသည် ။သစ်ရာကောက်ကျေးရွာတွင်ပြောကြားခဲ.သောစကားများ ဖြစ်သည်. နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးတို. ၊ အားလုံးအချုပ်ထဲထည်.ပစ်မည်တို. ၊ နယ်လှည်.၍ပါးရိုက်လာတာ တို. ၊ ပုဆိုးလှန်ပြလိုက်မယ် တို. လိုစကားများသည် ယဉ်ကျေးမှုအဆင်.အတန်းရှိသော ၀န်ကြီးတစ်ပါးပြောသင်.သောစကားများမဟုတ် ၊ သူ၏စကားတစ်ခွန်းကြောင်. သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဆောင်ရွက်နေသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၊ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိခိုက်စေသည် ။ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီ ကိုလည်းပြည်သူလူထုကအထင်အမြင်လွဲမှားနိုင်စေသည် ။ထို.ကြောင်. မိမိအကျိုးနှင်. ပါတီအကျိုးယှဉ်လာလျင် ပါတီအကျိုး ကို ဦးစားပေးရမည် ၊ ပါတီအကျိုးနှင်.တိုင်းပြည်အကျိုးယှဉ်လာလျင်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုဦးစားပေးပါမည် ဟူသော အစဉ်အလာနှင်.အညီ မိမိ ပါတီ ၊မိမိအစိုးရ ၊မိမိသမ္မတကြီးကို မထိခိုက် မနစ်နာစေရေးအတွက် ဦးအုန်းမြင်.မှ ကိုယ်ကျိုးစွန်.ကာရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည် ။ လူသာဓု ခေါ်၊နတ်သာဓုခေါ်စရာကောင်းလှပေ၏ ။ ဦးအုန်းမြင်.ကိုဝိုင်းဝေဖန်နေသော စာနယ်ဇင်းဆရာများ ၊နိုင်ငံရေးသမားများ အားလုံး အံ.သြကာပါးစပ်ပိတ်ကုန်ကြ၏ ။
ဒုတိယပြောင်းလဲမှုမှာ အစိုးရအဖွဲ.၏ ပေါ်လစီဖြစ်သည် ။ ကျူးကျော်များကို နောက်ထပ်ဘယ်သောအခါမှ အင်အားသုံး၍ အတင်းအဓမ္မ ဖယ်ရှားခြင်းမပြုတော.ပါ ။ မတတ်သာ၍ ဖယ်ရှားခဲ.ရပါလျင်လည်း နေစရာမရှိသော တိုင်းသူပြည်သားများကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားပြသနိုင်ပါကနေစရာ နေရာတစ်နေရာနိုင်ငံတော်မှအခမဲ.စီစဉ်ပေးပါ.မည်ဟု ကြေငြာလိုက်ရာလူတို.သည် ၀မ်းသာလွန်းသဖြင်.ထခုန်လေသည် ။ အိမ်ခြေမဲ.အဖိုးကြီးအဖွားကြီးများသည် ထိုင်းဘုရင်ကြီးဓါတ်ပုံကို ထိုင်းပြည်သူလူထုကအရိုအသေပြုကြသကဲ.သို. သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဓါတ်ပုံကို ကုန်း၍ ဦးချကန်တော.ကြလေသည် ။ အပြောင်းအလဲကားဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာခဲ.လေပြီ ။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် အပါအ၀င် MEC စသောတပ်မတော်မှပိုင်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ ရှေ.လျှောက်တပ်မတော်သည် စီးပွားရေးတွင်ဝင်မပါပဲ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးသက်သက်ကိုပဲလုပ်တော.မည်ဖြစ်ကြောင်း ။တပ်မတော်သားများ လစာငွေနှင်.သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် လွှတ်တော်မှတစ်ဆင်.သာ ဘတ်ဂျက်ငွေ တောင်းခံတော.မည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည် ။ လွှတ်တော်ထဲ၌ တပ်မတော်ပါဝင်နေမှုကိုလည်း ငါးနှစ်လျင်တစ်ကြိမ် ငါးရာခိုင်နှုန်းစီလျှော.ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာရာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို.၎င်း ၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသို.လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၅ တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသို.လည်းကောင်း ၂၀၃၀ တွင် လုံးဝမပါဝင်တော.ပဲ သုညရာခိုင်နှုန်းသို.လည်းကောင်း အသီးသီးလျှော.ချသွားမည်ဟုကြေငြာလိုက်ရာ တပ်မတော်သားများကို ပန်းကုန်းစွပ်သူစွပ် ၊ ထမင်းဖိတ်ကျွေးသူကကျွေး ၊ထိုင်ကန်တော.သူကကန်တော.ဖြင်.တစ်နိုင်ငံလုံးသည် ဘီအိုင်အေ ခေတ်ကတပ်မတော်ကဲ.သို.ပျိုတိုင်းကြိုက်သောနှင်းဆီခိုင် လိုဖြစ်နေပေသည် ။
ဤမျှသာမကသေး တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ.များ တိုးချဲ.ဆောက်လုပ်ရာ၌ သိမ်းယူထားသောမြေများကို မူလပိုင်ရှင်များသို.ပြန်ပေးပါ.မည် ဟု တပ်မတော်မှကတိပြုသည် ။ ပြန်ပေး၍မဖြစ်နိုင်တော.သော မြေများကိုမူ ခေတ်ကာလပေါက်ဈေးနှင်.အညီ ပိုင်ရှင်များကိုချက်ချင်းအချိန်မဆွဲပဲပေးလျှော်သွားမည်ဟုကြေငြာလိုက်သဖြင်. ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဟုလုပ်နေကြသော အစွန်းရောက်လယ်သမားများကို တစ်ပြည်လုံးက၀ိုင်းဝန်းရှုတ်ချကြလေသည် ။ စက်မှုဇုန်အဖြစ်သိမ်းထားသောလယ်မြေများကိုလည်းမူလပိုင်ရှင်သို.ချွင်းချက်မရှိပြန်ပေးရန်တရားရုံးချုပ်မှအနိုင်ဒီကရီချပေးလိုက်၍ခရိုနီများသည် မျက်နှာလေးငယ်ငယ်ဖြင်. သူတို.လုပ်ထားသော မဖြစ်ညစ်ကျယ် စက်မှုဇုန်များမှထွက်ခွာသွားရလေသည် ။ လယ်သမားများဘက်ကအကျိုးဆောင်ပေးသော နိုင်ငံရေးသမားများမှာ အလုပ်မရှိတော.သဖြင်. စက်မှုဇုန်အနီးတွင် ဘယာကြော်ဆိုင်များဖွင်.လှစ်ရောင်းချနေရလေသည် ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလေသည် ။ ၎င်းအပြင် ဖွဲ.စည်းပုံပြင်ဆင်ရာတွင် အလွန်ခက်ခဲအောင်ပြဌာန်းထားသော ပုဒ်မ ၄၃၆ (က) နှင်. (ခ) ကို ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြသည် ။
ထို.အပြင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ (ဗိုလ်မှူးကြီး -ငြိမ်း ) ကလည်း နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ ၊ မိမိထက် အသက်အရွယ် ၊ ရာထူး ဂုဏ်သိက္ခာကြီးသူများကို ရိုင်းစိုင်းသောစကားများဖြင်.ဝေဖန်ပြောဆိုမိသဖြင်. ၀န်ချတောင်းပန်လိုက်လေသည် ။ သူက မတ်လ ၆ ရက် ၂၀၁၄ နေ.ထုတ် Hot News ဂျာနယ်နှင်.တွေ.ဆုံခန်း၌ပြောကြားခဲ.သော အောက်ပါစကားများအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်သည် ။ သူပြောခဲ.သည်.စကားကောက်နှုတ်ချက်များမှာ
(xxxxဦးခွန်ဥက္ကာဆိုရင် UNFC ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှာ အတွင်းရေးမှူးတဲ.။UNFC ကိုကျွန်တော်တို.ကတော. ကုလသမဂ္ဂဘောလုံးအသင်းလို.ပဲသိတယ်။ ဦးခွန်ဥက္ကာကအတွင်းရေးမှူးလို.ပြောတယ်။ သူကပအိုဝ်.နီလား၊ပအို.၀်ဖြူလား ။သူ.ကိုပအိုဝ်.နီကလည်းလက်မခံဘူး ၊ပအို.၀်ဖြူကလည်းလက်မခံဘူး ၊ ဒါဆိုပအို.၀်ကြောင်ကျားပေါ. ။အဲဒိပအို.၀်ကြောင်ကျားက အဲဒိမှာအတွင်းရေးမှူးလုပ်နေတယ် xxxxxxxx NLD ကအမတ်တွေ ကိုယ်.ပုံကိုယ်ဖော်ပြီးတော.ပြိုင်ပါ ၊ ဓါတ်ပုံကြီးနဲ.လာပါ ။ကျွန်တော်ကတော. ဒီရှုပ် ပါတီကမောင်မဲဖြစ်ပါတယ် ၊ကြံ.ဖွံ.ကဘူးလက်လှဆွေနဲ.ပြိုင်ပါမယ် ဆိုပြီး သတ္တိရှိရှိပြိုင်ပါ xxxxxxxအရင်တုန်းကဦးတင်ဦးတို. ၊ ဦးကိုနီတို.ကို အရမ်းအထင်ကြီးခဲ.တယ် ။ ဒီပွဲရောက်မှ ဒီလူတွေဟာ အလကားလူတွေမှန်း ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ် xxxxxxဦးတင်ဦးကတပ်မတော်ကိုပြည်သူ.ချဉ်ဖတ် ၊ပြည်သူ.ချဉ်ဖတ်လို.သာပြောနေတယ် ၊သူသာရာထူးဆက်ရနေမယ်ဆိုရင် သူဒီစကားမျိုးပြောမှာမဟုတ်ဘူး ။သူအထုတ်ခံရလို.ဒီစကားမျိုးပြောတာ ။သူအထုတ်ခံရတဲ.နောက်ပိုင်းကစပြီး ဒီအဘိုးကြီးက အားလုံးကို ကိုးလို.ကန်.လန်.တိုက်လာတာ xxxxxx ဒီအဘိုးကြီးက ဒေါ်စု……..နားခိုကပ်နေတဲ. အဘိုးကြီးလို.ပဲမြင်မိသွားတယ် xxxxx NLD မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ.ကောင်တွေတစ်ကောင်မှသောက်သုံးမကျဘူးဆိုတာလည်းသိတယ် xxxx ) ဟူသတည်း ။ ၎င်းအပြင်တပ်မတော်နှင်.ပါတ်သက်၍လည်း ဦးလှဆွေက ( xxx နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းခဲ.တာ ခြေလျင်စစ်သားတွေတစ်ယောက်မှမပါဘူး ။ ဖမ်းခဲ.တာထောက်လှမ်းရေးကကောင်တွေပဲ ။လက်ရှိကျွန်တော်တို.တပ်မတော်ဘာ.ကြောင်.အပြောအဆိုခံနေရသလဲ ။ဘာ.ကြောင်.အဝေဖန်ခံနေရသလဲဆိုရင် ထောက်လှမ်းရေးကြောင်.ပဲ ။ ခြေလျင်စစ်သားတွေသေနတ်ကိုင်ပြီးကာကွယ်နေချိန်မှာ ထောက်လှမ်းရေးကတပ်ကြပ်အဆင်.ကခွေးချည်တဲ.ကြိုးလောက်ရှိတဲ. ဆွဲကြိုးကြီးတွေဆွဲပြီးနေကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တာကိုလည်း သူ.အထက်ကလူကြီးတွေက ပြုံးပြုံးကြီးကြည်.နေကြတယ် ။လက်ရှိကာလမှာတပ်မတော်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး ၊ ဘာမှအပြစ်၇ှိတာမဟုတ်ဘူး၊တကယ်ကိုအပြစ်ရှိပြီး တကယ်ကိုလုပ်ခဲ.တဲ.၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ.တဲ.ထောက်လှမ်းရေးကိုမပြောဘဲနဲ.၊ကျွန်တော်တို.တပ်မတော်ကိုပြောနေတာအဓိပါယ်မရှိဘူး xxxx )
စသည်ဖြင်.ပြောကြားခဲ.ပေ၏ ။ ရာထူးလက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်အနေဖြင်. သူ၏ပြောကြားချက်များသည် နိုင်ငံတော်က တိုင်းရင်းသားများနှင်.ဆွေးနွေးနေသော အမျိုးသားရင်ကြားစေ.ရေး ၊ ၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး စသော ဒို.တာဝန်အရေး(၃)ပါးကိုထိပါးမိသဖြင်. မိမိဘာသာ တာဝန်သိသိသိက္ခာရှိရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ကြောင်း ဦးလှဆွေမှကြေငြာ ရာ တစ်ပြည်လုံးအံ.သြချီးမွမ်းမကုန်နိုင်အောင်ရှိကြပေ၏ ။ မြန်မာပြည်ကားတကယ်ပြောင်းလာပေပြီ ။
တစ်နေ.က မြို.ပါတ်ရထားသွားစီးရာ ရထားတစ်စီးသည် သတ်မှတ်ချိန်ထက် ငါးမိနစ်တိတိနောက်ကျပြီးမှရောက်လာသောကြောင်. ရထားပို.ဆောင်ရေးတာဝန်ခံသည် ရှက်လွန်းသဖြင်. အရှက်နှင်.အသက်ကိုလဲကာမိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွား၏ ။ ရန်ကုန်မြို.တွင်းအမှိုက်ပုံတစ်ခုတွင် ကြွက်တစ်ကောင်သည်ဖြတ်ပြေးသွားရာ မြို.တော်ဝန်သည် အလွန်တုန်လှုပ်ခြောက်ချားသွားပြီး တာဝန်မှတစ်ခါတည်းနှုတ်ထွက်လွှာတင်သွားသည်ဆို၏ ။ ကလေးတစ်ယောက်သည် သူကစားနေသောကစားကွင်းကို အာဏာပိုင်များက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီနှင်.ပေါင်းကာ တိုက်ခန်းများဆောက်လုပ်လိုက်သောကြောင်. ကစားစရာနေရာမရှိတော.ကြောင်းသမ္မတထံစာရေးတိုင်ကြားရာ စာရေးပြီး ၃ ရက်အတွင်းမှာပင် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းကြည်.ရှုစစ်ဆေးပြီး ကစားကွင်းကိုကလေးများအားပြန်လည်ပေးအပ်ရုံသာမက ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ.ကြသော ဒေသအာဏာပိုင်များကို မော်စကိုသို.ပို.လိုက်သည် ဆို၏ ။ရန်ကုန်မြို.တွင်လန်ဒန်ကဲ.သို.နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကား( Double Decker ) များပြေးဆွဲရာ လေအေးစက်မှုာအေးလွန်းသဖြင်. လူတို.သည် သွေးခဲပြီးသေဆုံးသွားကြသည်ဟူ၏ ။ လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏သိမ်နှင်.စေတီကို ဖြိုဖျက်ခြင်းလုံးဝမလုပ်ပဲ အဆင်းမြင်.နည်းပညာများသုံး၍ အကောင်အထည်မပျက် လွတ်ကင်းရာသို.ရွေ.ှပြောင်းပေးလိုက်နိုင်ပေသည် ။
တရားစီရင်ရေးတွင်လည်း ဥပဒေအထက်တွင်ဘယ်သူမှမရှိဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်တွေ.ကျင်.သုံးသည်.အနေဖြင်. ညဘက်တွင် ပြိုင်ကားများဖြင်.ဆိုးသွမ်းရမ်းကားနေသော လူကြီးသားသမီးအချို.ကို ထောင်ဒဏ်အပြင် ကြိမ်ဒဏ်ကိုပါ ချမှတ်အပြစ်ပေးသဖြင်. ရေပေါ်ဆီသားသမီးအချို. ထိတ်လန်.တုန်လှုပ်သွားကြ၏ ။ မီးပွိုင်.တွင် တာဝန်ကျယာဉ်ထိမ်းတပ်ကြပ်ကြီးအား ဥပဒေမဲ. ရမ်းကားသော လူတစ်ချို.ကို ထောင်ဒဏ်ချပစ်လိုက်၏ ။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် တွင်ဒိုင်လူကြီး အားပါးရိုက်သောအသင်းပိုင်ရှင်အား ထောင်ဒဏ် (၃)လနှင်. ကွင်းအတွင်းဝင်ရောက်ခွင်. ၃ နှစ်ပိတ်ပင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်လိုက်၏ ။
အစိုးရအဖွဲ.၀င်များသည် သူတို.၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဥစ္စာဓနစာရင်းကိုထုတ်ဖော်ကြေငြာကြသည်.အပြင် ပြည်ပတွင်အပ်နှံထားသည်. ၎င်းတို.မိသားစုဝင်များဆွေမျိုးများ၏ ဘဏ်စာရင်းများ ၊ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖော်ထုတ်လာကြ၏ ။ ရာထူးမှအနားယူချိန်တွင် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ၊ အစိုးရအဖွဲ.၀င်ဝန်ကြီးများသည် သူတို.၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်ခါထပ်မံ၍အစစ်ခံပြန်သည် ။ စာရေးဆရာများ ၊ အယ်ဒီတာများ ၊သတင်းထောက်များမှာ ထိုသို.အစစ်ဆေးမခံဝံ.၍ အစိုးရကိုအလွန်အထင်ကြီးလေးစားလာကြလေသည် ။
အဖွဲ.၀င် (၁၅)ဦးပါ အဂတိတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ဖော်ထုတ်မှုများကြောင်. လာဘ်စားခဲ.ကြသော အခွန်ဦးစီးမှူးများ ၊ဆည်မြောင်းညွှန်မှူး ညွှန်ချုပ်များ ၊ တရားသူကြီးများ ၊ စည်ပင်အရာရှိများ ၊ အကောက်ခွန်ဌာနမှအရာရှိများ ၊လမ်းတံတားအင်ဂျင်နီယာများ ၊ GE တပ်မှအရာရှိများ ၊၀န်ကြီးဟောင်းအချို.သည် အင်းစိန်တောရသို. ဘုရားဖူးရောက်ကြကုန်၍ ၎င်းတို.ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်များ ရုံးများ ကုမ္မဏီများချိပ်ပိတ်အသိမ်းခံကြရပေ၏ ။၎င်းတို.၏မယားငယ်များကိုလည်းစသုံးလုံးရုံးခန်းသို.ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာအချို.မှာ ရုံးခန်းပေါ်မှမတော်တဆလိမ်.ကျသေဆုံးကြပေ၏ ။ ရာထူးနှင်.မလိုက်အောင်ချမ်းသာကြကုန်သော ဗိုလ်ချုပ်တစ်ချို.ကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းကြကုန်၏ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ်သည်မိမိတို.အစွမ်းဖြင်.မပေါ်နိုင်သေးသော ရန်ကုန်မြို.စိမ်းလဲ.ကန်သာလူသတ်မှုနှင်. ဒီပဲယင်းမြို.မှ အမှုအခင်းကြီးများကို စကော.ဒ်တလန်ယာဒ် စုံထောက်အဖွဲ.အားဈေးကြီးပေးကာငှားရမ်းဆောင်ရွက်ကြကုန်၏ ။
ကျွန်တော်တို.စာရေးဆရာများသည် မိမိတို.အမှားကြီးမှားပြီကိုသိလိုက်၏ ။ အမြဲလိုပင်ကျွန်တော်တို.သည်အစိုးရ ယန္တယားကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေရာ အစိုးရ ၊လွှတ်တော်နှင်.၊တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ဘက်မှ ဤကဲ.သို.ဖိဖိစီးစီးတရားမျှတစွာဆောင်ရွက်နေမှုတို.ကိုမြင်ရသောအခါ မှားယွင်းစွတ်စွဲခဲ.မှုအတွက် အမြန်မတောင်းပန်ပါက မြေငလျင်ဟက်တက်ကွဲကာ စာရေးဆရာများသည်အရှင်လတ်လတ် မဟာအ၀ီစိသို.ကျရောက်ရပေအံ.ဟု ပြင်းစွာတုန်လှုပ်သောကြောင်.ဆောက်တည်ရာမရပဲ ဇီးကင်းပမာဏခန်.ရှိသော ချွေးစက်တို.သည် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာပေသည် ။သမ္မတကြီး ၊လွှတ်တော်အမတ်များ နှင်.တပ်မတော်ကို ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးတောင်းပန်မှအပြစ်တွေကြေတော.မည်ဟုတောင်းပန်ရန် ဘုရားခန်းတွင်ထိုင်လိုက်စဉ်မှာပင် မဟာပထ၀ီမြေကြီးသည် သိမ်.သိမ်.ခါအောင်တုန်လှုပ်သွားပြီးကျယ်လောင်သောအသံနှင်.အတူ ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်လုံးသည် လေဟာနယ်ထဲသို.လွင်.စင်သွားလေသည် ။ ကျွန်တော်တို.နောင်တကားနောက်ကျခဲ.ချေပြီတည်း ။
“ စာရေးဆရာ၊စာရေးဆရာသတိထားလေ “
“ ကိုညီကိုညီ မြန်မြန်ထ မြန်မြန်ပြေးလေ ၊ ဘာကြောင်ကြည်.နေတာလဲ “
ကျွန်တော်.မိန်းမသည် ကျွန်တော်.ကိုလှုပ်နှိုးနေပေ၏ ။
“ဘာဖြစ်တာလဲမိန်းမ တပ်မတော်နဲ.အစိုးရကိုပြစ်မှားမိလို. ငါ.ကိုမြေမျိုခံရတာမဟုတ်လား “
“ ဘယ်ကမြေမျိုခံရမှာလဲ ၊ကျွန်မတို.အိမ်ကို ကျူးကျော်ဆိုပြီးဘူဒိုဇာနဲ.လာထိုးနေတာ တစ်ခြမ်းပါသွားပြီ ၊ အဲဒါကြောင်.ဘူဒိုဇာပြန်လှည်.မလာခင်ရှင်.ကိုမြန်မြန်ပြေးဖို.ပြောနေတာ ၊အရေးထဲနေ.ခင်းကြောင်တောင် အိပ်ပျော်ပြီးအိပ်မက်မက်နေသေးတယ် “
“ ငါတို.အိမ်က ဘိုးဘွားပိုင်မြေမဟုတ်ဘူးလား ၊ ဘယ်လိုလုပ်ကျူးကျော်ဖြစ်သွားတာလဲဟ “
“ရှင်.ဘာသာ ဘိုးဘွားပိုင်ချင်ရင် နောက်ဘ၀မှပိုင် အခုတော.တပ်ပိုင်ဆိုလား၊ ဦးမြိုင်ဆိုလား ၊ဦးပိုင်ဆိုလား အဲဒါနဲ.မလွတ်လို.လာဖျက်တာတဲ. ၊ မြန်မြန်ပြေးတော. ကျွန်မတော.လစ်ပြီ “
ဟုပြောကာ မိန်းမသည် လျှိုကလေးထဲသို.လှိမ်.ချလိုက်ရာကျွန်ုပ်လည်း ဘူဒိုဇာဂေါ်ပြားကြီး အနားကပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင်. ကလောင်လက်နက်နှင်.စာရွက်များကိုအသာချကာ မိန်းမနောက်သို.ထပ်ကြပ်မကွာ……ဂျက်ကီချမ်းကဲ.သို. ဒိုင်ဗင်ပစ်၍ လိုက်ခဲ.ရပါကြောင်း ။
News Watchစောင်.ကြည်.သတင်း ဂျာနယ်
Posted by Myo Lwin Aung at 4:46 AM